COVID-19: Ndị na-azụ ahịa na #StayAtHome Statzụta Ọnụ | Martech Zone
Saturday, May 2, 2020 Saturday, May 2, 2020 Douglas Karr
Ihe adịghị mma maka ọdịmma akụ na ụba mmadụ ọ bụla n'ihi ọrịa na-efe efe na iwu na-esochi mkpọchi sitere n'aka gọọmentị gburugburu ụwa. Ekwenyere m na nke a ga-abụ akụkọ ihe mere eme nke ga-enwe oke, mmetụta na-adịgide adịgide na ụwa anyị… site na ịrị elu azụmaahịa na enweghị ọrụ, n'agbanyeghị na mmepụta nri na lọjistik. Ọ bụrụ na o nweghị ihe ọ bụla, ọrịa a na-efe efe egosila na akụnụba ụwa anyị esighi ike.
Nke ahụ kwuru, ọnọdụ a manyere dị ka nke a na-eme ka ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa gbanwee. Dịka azụmahịa na-eme akụkụ ha ma nwee ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ, anyị na-ahụ nnabata nkwukọrịta vidiyo. Ikekwe anyị ga-eru ọkwa nkasi obi site na ọrụ a ebe enwere ike ibelata njem azụmahịa n'ọdịnihu - iwetulata ụgwọ ọrụ yana inyere gburugburu aka. Ọ bụghị ozi ọma maka njem na ọrụ ụgbọ elu, mana ejiri m n’aka na ha ga-emegharị.
OwnerIQ, nke Inmar nwetara na Q4 2019, na-enye ntakịrị nghọta banyere otu ndị na-azụ ahịa si eme mgbanwe maka obibi ọhụụ ha nke ịnọ n'ụlọ, ịzụ ahịa n'ụlọ, na ịgbanwe omume zụrụ ha na ngwaahịa. OwnerIQ nyochara ihe ịzụ ahịa na ntanetị si na CoEx Platform ha iji nye ozi ahụ, nke ha gosipụtara nke ọma na ozi ha, Kedu ka ndị ahịa si edozi #Home.
Ndị ahịa COVID-19 Mgbanwe Omume
O doro anya site na infographic na ndị na-azụ ahịa na-etinyekwu ego na ọtụtụ ihe:
Akụrụngwa metụtara Office - melite nkasi obi ha na imeputa ihe mgbe ha na aru oru n’ulo oru ha.
Ọnọdụ Homelọ - itinye ego na ihe na-eme ka ịnọ n'ụlọ bụrụ ihe nkasi obi.
Personal Care - itinye ego na ihe ndị na-eme ka uche ha dị nro na nrụgide nke ọrịa na-efe efe na iche.
Nlekọta ụlọ - n'ihi na anyị na-anọ oge n'ụlọ ma anyị anaghị apụ, anyị na-etinye ego n'ọrụ na n'ime ụlọ anyị.
Xtensio: Mepụta, Jikwaa, ma Wepụta Nchịkọta Okike Gị